सर्लाहीको स्वास्थ्य चौकीमै छैनन्, शौचालय – WASHKhabar
सर्लाहीको स्वास्थ्य चौकीमै छैनन्, शौचालय
Tuesday, November 26, 2019 434 पटक हेरिएको
सर्लाही : स्वास्थ्य र सरसफाइको पाठ सिकाउने स्वास्थ्य चौकीमा समेत शौचालय छैनन् भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने ईश्वरपुर, चन्द्रनगर, गाडैता, मलंगवा, कविलासी लगायतको स्थानीय तहका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा अझै व्यवस्थित शौचालन छैनन् ।
सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका वाड नं. २ जयपुरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा निर्माण भएको शौचालय सन्चालनमा नआउँदला स्वास्थ्य चौकीमा आउने बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । जयपुरमा स्वास्थ्य चौकीमा जयपुरका साथै अर्को गाउँ पिपरनाथ, भटौलिया र बेल्वाजब्दीबाट समेत उपचारका लागि विरामीहरु आउने गर्छन् । स्वास्थ्य चौकीमा शौचालय भएपनि सञ्चालनमा नआउँदा बिरामीहरु खुल्ला ठाउँमै दिसापिसाब गर्न बाध्य छन् । विरामीलाई बोतलमा पानी दिएर खेतमा पठाउनु परेको त्यसमै काम गर्ने एक स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । चर्पी सञ्चालनमा नआउँदा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने कर्मचारी विद्यालयको चर्पी प्रयोग गर्छन् । सार्वजनिक बिदामा विद्यालयको शौचालय समेत बन्द हुँदा बढो समस्या पर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी रामविनय साहले बताउनुभयो ।
त्यसमा पनि स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई त अझ बढी समस्या पर्ने गरेको साहले बताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष धेरै पटक आग्रह गरेपनि मौन रहेको स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘हामीले भएका शौचालय सन्चालनका लागि पटक पटक आग्रह ग¥यौं, तर कारण के हो बुझ्नै सकेको छैन’ साहले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधार निर्माणको लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा अध्यक्ष भोला महतोले बताउनुभयो । उहाँले एक महिना भित्रमै स्वास्थ चौकीको शौचालय सञ्चालनमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो समस्या गोडैता नगरपालिकामा मात्र नभई जिल्लाको अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने मरिचमान माविको समस्या पनि उस्तै छ । शौचालय भएपनि एउटा पनि सञ्चालनमा नआउँदा विद्यालयहरु बाहिरै दिसापिसाब गर्न बाध्य छन् । चन्द्रनगरको स्वास्थ्य चौकीमा समेत व्यवस्थित शौचालय नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।